China3ply ခွဲစိတ်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးဖြစ်သော CE / FDA သုံးမျိုးသုံးအကာအကွယ်၊ မ ၀ တ်ထားသောအရည်ပျော်လွင့်ဒဏ်ရာဒဏ်ခံနိုင်သောစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Meimao ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
၃ ပေအလွှာခွဲထားသောမျက်နှာမျက်နှာဖုံးမျက်နှာကျက်ဖြစ်သော CE / FDA သုံးမျိုးအလွှာကာကွယ်မှု၊ ယက်မဟုတ်သောအရည်ပျော်လွင့်အဝတ်အထည်၊
၁။ အလွှာ ၃ ခုအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ ရက်မဟုတ်သောပစ္စည်း
(၂) ခွဲစိတ်ထားသောဒဏ်ရာများကိုဖွင့်ရန်ချောနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးရန်နှင့်ခွဲစိတ်လူနာများ၏ခန္ဓာကိုယ်အရည်များဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများသို့မပျံ့နှံ့စေရန်။
8. စံ EN146 တွေ့ဆုံရန်
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း - ယက်မဟုတ်သောထည်၊ အရည်ပျော်သောအထည်၊ နားကွင်း၊ နှာခေါင်းတံတား
စစ်ထုတ်ခြင်းထိရောက်မှု - ၎င်းသည်ဝတ်သူအားညစ်ညမ်းစေရန်မျက်နှာဖုံးကို ဖြတ်၍ သွေးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအရည်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများအတွက်စိမ့်ဝင်မှုစွမ်းအား ၉၅% ကျော်ရှိသော်လည်းအမှုန်များအတွက်ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှု၊
အထွေထွေပြင်ပလူနာ၊ ရပ်ကွက်ဝန်ထမ်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများစသည်။ ရောဂါ၊ ရဲ၊ လုံခြုံရေး၊ အမြန်ပို့ခြင်းစသည့် ၀ န်ထမ်းများနှင့်ပါ ၀ င်သည်။
၃။ လေယိုစိမ့်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ စစ်ဆေးပါ၊ မျက်နှာဖုံးကိုစီစဉ်ပြီးမျက်နှာပေါ်တွင်ကပ်ပါ
သုံးစွဲနည်း - \_ t
သင်၏နားရွက်ပေါ်ရှိ elastic ကြိုးများကိုချွေကာသတ္တုနှာခေါင်းကိုယ်ထည်ဖြင့်သင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်အလင်းတံဆိပ်ခတ်ထားပါ။
အထုပ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများမှာ ၅၀ ပီစီမျက်နှာဖုံးများ
၁။ ဒီထုတ်ကုန်သည်တစ်ခါသုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး၊ အဝတ်လျှော်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်အသုံးမပြုပါနဲ့။ ဒါကညစ်ပတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးရင်အချိန်တန်ရင်ပြန်ပေးပါ။
2. ထုပ်ပိုးပျက်စီးလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်မသုံးပါနှင့်။
သိုလှောင်ခြင်းအခြေအနေများ - ၀ မှ ၃၀ ဒီဂရီတွင်သိုလှောင်ထားပါ။ ၎င်းကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းသော၊ မှောင်မိုက်သော၊ ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်မီးဘေးရင်းမြစ်များနှင့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများနှင့်ဝေးဝေးသိုလှောင်ထားသင့်သည်။
တရားဝင်မှု - ထုတ်လုပ်ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်
မူလအစ - တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်